နည်းပညာနယ်ပယ်သုံးအတိုကောက်စကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ် - YOYARLAY Digital Media and News
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်သုံးစွဲနေကြတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးအတိုကောက်တွေက များစွာရှိနေပါတယ်။ မူရင်းအဓိပ္ပာယ်အပြည့်အစုံရှိနေပေမဲ့ ရေးသားတဲ့အခါရှည်လျားပြီးဖောင်းပွတာကြောင့် အတိုချုံ့ပြီးခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲနေကြတာပါ။ အဲဒီထဲကတချို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိထားပြီးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အမှတ်တမဲ့ဖြစ်၊ ရုတ်တရက်စဉ်းစားရခက်နိုင်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်တွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်နည်းပညာနယ်ပယ်က အတိုကောက်စကားလုံးတချို့ကို သိရှိမှတ်သားထားနိုင်စေဖို့ ရှာဖွေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
1. CCTV – Closed Circuit Television
2. SD Card – Secure Digital Card
3. VIRUS – Vital Information Resources Under Seige
4. PDF – Portalable Doucument Format
5. JPEG – Joint Photographic Experts Group
7. SQL – Structure Query Language
8. GIF – Graphic Interchange Format
10. www – World Wide Web
12. ADSL – Asymmetric Digital Subcriber Line
13. LAN – Local Area Network
14. WLAN – Wireless Local Area Network
15. MPEG – Moving Picture Experts Group
16. HDMI – High Defination Multimedia Interface
17. GPS – Global Positioning System
18. SMS – Short Message Service
19. MMS – Multimedia Message
20. I/O – Input Output
21. CPU – Central Processing Unit
22. GPU – Graphic Processing Unit
23.UPS – Uninterruptible Power Supply
Previous Previous post: ONE Championship မှ အကောင်းဆုံးအလဲထိုးအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့သူ (၅) ဦး
Next Next post: လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုတွေကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူဖို့ မန်ယူကြယ်ပွင့်တွေ တောင်းဆို